२१ वर्षकी युवतीको संसारभरीका पुरुषलाई अफर : १ लाख जनासँग यस्तो रेकर्ड बनाउँने लक्ष्य – NepalajaMedia
एजेन्सी । उद्देश्य के लिनु ? उडि छुनु चन्द्र एक भन्ने गरिन्छ हामीकहाँ । तर पोल्याण्डकी एक युवतीले भने उडेर चन्द्रमा छुने भन्दा पनि अझै कडा जस्तो लाग्ने उद्धेश्य लिएकी छिन् । २१ वर्षकी ती युवतीले आफ्नो जिवनकालमा १ लाख जना पुरुषसँग ओ’छ्यान त’ताउने लक्ष्य लिएकी छिन् । उनले आफ्नो यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि काम सुरुवात गरिसकेकी छिन् र अहिलेसम्म केही संख्यामा पुरुषहरुलाई आफ्नो चपेटामा पारिसकेकी छिन् ।
एनिया लिसेवस्का नामकी ती युवती आफ्नो यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि केवल पोल्याण्डका तन्नेरीसँग मात्र ओ’छ्यानमा रहन चाहँदैनिन् । विश्वका सबै देशमा पुगेर सबै देशका पुरुषसँगको स्वाद चाख्ने चाहना उनको रहेको छ । उनले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि हरेक पुरुषलाई उक्त कार्यका लागि २० मिनेटको समय दिनेछिन् ।
आफ्नो ब्लगमार्फत उनले दिएको जानकारी अनुसार आफ्नो यो म्याराथनको सुरुवात उनले अघिल्लो महिना वार्सा सहरबाट गरिसकेकी छिन् । अहिलेसम्म उनले २८४ जना पुरुषसँग आफ्नो योजना मुताविक काम गरिसकेको बताइएको छ ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने जिवनकालमा १ लाख पुरुषलाई आफ्नो वसमा पारेर अनुभव दिलाउने लक्ष्य लिएकी यी युवतीको ब्वायफ्रेण्ड समेत छ । आफुले यो सुखका लागि म्याराथन गर्न लागेको भन्दै आफ्नो कामलाई मन पराएर कसैले आर्थिक सहयोग गर्न चाहेमा त्यो पैसा सामाजिक काममा लगाउने उनी बताउँछिन् ।
आफुले यो कार्यलाई माया गर्ने तथा पुरुष र हँसिमजाक आफुलाई मन पर्ने उनको भनाइ रहेको छ । उनले आफुसँग ओ’छ्यानमा आउने हरेक पुरुषलाई २० मिनेटको समय दिने बताएकी छिन् । यस अर्थमा उनले १ लाख पुरुषसँग रहदासम्म ३३ हजार ३ सय ३३ घण्टा उनले यही कार्यमा बिताएकी हुनेछिन् ।
यसको अर्थ उनले लगातार यस्तो कार्य गरेमा पनि एक लाख जनासँग पुरा गर्न झण्डै ४ वर्ष लाग्नेछ । उनले आफ्नो योजना पूरा गर्नका खातिर हप्ताको दुइ दिन यसकै लागि छुट्टाएकी छिन् । २० वर्षमा १ लाख पु’रुषसँग ओ’छ्यानमा रहने लक्ष्य लिएकी उनले हरेक शनिवार र आइतबार औषतमा १४.१४ जनासँग यो कार्य गर्ने योजना बनाएकी छिन् ।
Prevबिहेपछि महिलाको हि’प किन बढ्छ? यस्ता छन् १० अनौठा कारण !
Nextतातो पानी पिउने बानी छ भने एकचोटी नछुटाई पढ्नुहोस है